ULondolozo lweeNkcukacha zeGeopolitics zase-UK-Funda ukuRhweba
tag: I-UK Geopolitics
I-UK Geopolitics: I-Sterling Climbs njenge-Brexit Party yoQinisekiso lweQela eliDala ukuXinana
Ukuhlaziywa: 12 Novemba 2019
Kwangoko ezindabeni, inkokeli yeqela laseBrexit ibixele ukuba zonke izihlalo zesenethi ezingaphezulu kwama-600 ziya kuphikiswa ngumbutho wakhe. Uninzi lwaqikelela ukuhla kwenkxaso kwi-Nkulumbuso yase-UK, uBoris Johnson enika iBrexit ulwandiso.
Nangona kunjalo iziganeko zithathe ukujija, njengoko kupapasho lwamva nje, u-Nigel Farage utyhile ukuba umbutho wakhe uzakususa zonke izihlalo eziwinwe liqela elizimeleyo kunyulo oludlulileyo kwaye zidibanise ukuphumelela ngokuchasene ne-anti-Brexit.
Uninzi lukubona oku njengokuxhasa uBoris Johnson kunyulo oluzayo lwangoDisemba 12.
Iziphumo kwiMali eziMkhulu
Iinkunzi zeenkomo zazivavanyile intengiso ye-sterling njengoko ibizinzile ibambelele kwincopho yayo kaMeyi kwi-paire yayo yokuma kwi-85.62 pence. Ngexesha lengxelo, yayithengisa ngeedenari ezingama-85.79. Iphakame kakhulu ngaphezulu kwepesenti xa ithelekiswa ne-USD ngaphakathi kweeyure ezili-12 emva kokukhutshwa kweendaba. Ngaphambi kweendaba, iSterling ithengise ngaphezulu kwe- $ 1.28.
Iponti: intambo yafumana ukubuyela njengoko ithengisa nge $ 1.2896 emva kokukhutshwa kweendaba. Abahlalutyi beMarike bacinga ukuba iBrexit inokuthatha into enzima njengoko amathuba epalamente axhonyiweyo enciphile. Idrop yarekhodwa kamva njengoko yayithengiswa nge-1.2858 yeedola ngexesha lengxelo.
Ezinye iimali: iindaba zibe nefuthe elithulisiweyo kwezinye iimali. KwiDola, oku kunokuba kungenxa yokuba imakethi yase-US ibingavulekanga ngokupheleleyo malunga noMhla wamaVeterans. Isibini se-euro / idola sathengisa ngaso nge-1.1033 yeedola, sibambe sizinzile, ngelixa idola yayijikeleze ngaphezulu kwi-yen ye-109.15.
Enye into echaphazela i-USD kukungaqiniseki okukhoyo ngoku malunga neentetho zorhwebo phakathi kwe-US ne China. Abatyalomali banyathela umhlaba olumkileyo njengoko belinde intetho kaMongameli wase-US kwiQela lezoQoqosho e-NY. Iziphithiphithi ezandileyo eHong Kong kukholelwa ukuba ziyisingele phantsi i-greenback.
I-Yuan yaseTshayina igcinwe izinzile kwi-7.004 xa ithelekiswa nedola, njengoko abatyali-mali belindele iingxelo ezintsha kunye nohlaziyo lweemarike bezopolitiko zaseHong Kong.
Idola yaseNew Zealand iwile njengoko abatyali zimali beqikelela ukuba inzala incitshiswe yibhanki ephezulu ebonisa amanani anyukayo akhula ngokunyuka kwamaxabiso. Yehla nge-0.6% ukuya kwi-0.6326 yeedola emva kwentshukumo yebhanki. Igqityiwe ukurhweba nge- $ 0.6333. I-Aussie nayo yabanjwa kwiwebhu njengoko yayihamba iye kuthi ga kwi $ 0.6832 ephantsi.
tags Brexit, Sterling, I-UK Geopolitics